» रचनालाई धोका भएकै हो त ?
रचनालाई धोका भएकै हो त ?
१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०९:३५
मकवानपुर, १७ फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल सिजन ३’ को प्रतिस्पर्धाबाट झापाकी रचना रिमाल बाहिरिएसँगै शोका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । रचनाले गाला राउण्डको दोस्रो, तेस्रो र चौथो हप्ताको प्रस्तुतिपश्चात ३ पटकसम्म सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । सर्वाधिक चर्चामा रहेकी रचनाले लगातार सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट ८ सम्मको यात्रा तय गरेकी थिईन् तर गाला राउण्डको उत्कृष्ट ७ प्रतियोगी छनौट गर्ने क्रममा भने एकाएक नसोचेको नतिजा आयो । लगातार सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै आएकी रचना बटम थ्रीमा पर्नुका साथै शो बाटनै बाहिरिए । सर्वाधिक भोट प्राप्त गरिरहेकी रचना कसरी एकाएक शोबाट बाहिरिईन् भन्ने कुराको अहिले चर्चा चलेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
रचना बाहिरिएसँगै उनका प्रशंसकहरुले रचनाको प्राप्त भोट सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । त्यसो त रचनाले निर्धक्क भई गाउन नसकेको भन्दै निर्णायक र दर्शकहरुबाट पनि टिकाटिप्पणी भएका थिए । तर रचनाको प्रस्तुति दमदार नभएको कमेन्ट आएतापनि उनको सुमधुर आवाजलाई मनपराउने दर्शकहरुको कमि थिएन । उनी सबैकी प्यारी बहिनी बन्दै दर्शकको सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्न सफल भएकी थिईन् । तर उनले एकाएक शोबाट नसोचेको नतिजा भोग्नुपरेको छ । के रचनालाई धोका भएकै हो त ? यस बारेमा सबैको फरक फरक मत छ ।
झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानै उमेरमा संघर्ष गर्न सिकेकी छिन् । सानो छँदा मन्दिरमा भजन गाउने गरेकी रचनाले विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिँदै गीत गाउन थालेकी हुन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दाको समयमा संगीतको कक्षामा भर्ना भए पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । उनको संगीत सिकाईको समय ४ महिनामा मात्र सिमित भयो । संगीतमै करियर बनाउने योजनामा रहेकी रचनालाई संगीतमा लगाव भएका कारण उनका आमाबुवाले समेत साथ दिएका छन् । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडन सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।